Rooble oo raalli galiyay Guudlaawe iyo shirkii oo maanta furmaya | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo raalli galiyay Guudlaawe iyo shirkii oo maanta furmaya
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa qadka taleefanka ku xalliyay tabashadii Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, kaas oo hore u qaadacay ka qeyb galka shirka.
MUQDISHO, Soomaaliya - War ka soo baxay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaa lagu sheegay, in labada masuul qadka taleefanka ku dhameeyeen madmadowgii jiray, kadib markii uu Rooble bixiyay raalligalin, Madaxwynaha Hirshabeelle ayaan aaladda fogaan aragga kaga qeyb galaya shirka wadatashiga oo maanta ka furmaya Muqdisho.
“Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo Khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Dowlad-goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe) ayaa ka raalli galiyay tabashadii uu ka qabay ka qeyb galka Shirka Golaha Wadatashiga Qaran. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa shirka maanta furmaya uga qeyb galaya aaladda fogaan aragga ee ZOOM”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xaafiiska Rooble.
Shirka oo la qorsheeyay inuu furmo shalay oo Axad ahayd, ayaa dib u dhacay kadib warkii ka soo baxay Hirshabeelle ee ay ku qaadaceen ka qeyb galka shirka.
Wadahadallada, waxanaa diiradda lagu saari doonaa qodobadii ka hirgalay heshiiskii 27-kii May, iyo qodobbo kale oo la xariira degaan doorashooyinka iyo yareynta ergada dooraneysa Xildhibaannada Golaha Shacabka.
U jeedka shirka oo ah dardar gelinta doorashada, ayaa la filayaa in Guddiga farsamada uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ay hordhigi doonaan Golaha Wadatashiga Qorshayaasha iyo hannaanka ay u dajiyeen doorashada.
Shirkaan waxaa lagu magacaabi doonaa Guddiga dib u heshiisiinta Heerka Wasiir ee afarta Dowlad Goboleed oo aan ku jirin Jubbaland, kuwaas oo degmada Garbahaarey u tagaya xallinta arrinta gobolka Gedo, waxaana ku dhawaaqi doona Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta, sida ku cad heshiiskii 27-Kii May.
Jadwal cusub oo doorasho ayaa la sameyn doonaa maadaama uu fashilmay jadwalkii hore, waxaana mudnaan gooni ah la siin doonaa wixii cabasho jira, halka sidoo kale, kulanka la isaga wareysan doono arrimaha HirShabeell, gaar ahaan magaalada Baladweyne.
Waxaa Shirka qeybihiisa danbe ka qeyb geli doona Guddiyada doorashada ee la magacaabay, waxaana sidoo kale la gorfeyn doonaa arrimaha amniga goobaha ay ka dhacaan doorashooyinka.